Guddoomiyaha Kulmiye Oo Sheegay In Wasiiradda Is Casilay Loo Eegayo Xeerka Xisbiga | Saxafi
Guddoomiyaha Kulmiye Oo Sheegay In Wasiiradda Is Casilay Loo Eegayo Xeerka Xisbiga
Guddoomiyaha KULMIYE “Xisbigu xeer ayuu leeyahay, qofkii ku gefa xeerkaasna waa lagu ciqaab mariyaa”
Hargeysa, Somaliland, October 29, 2015 (Saxafi) – Guddoomiyaha xisbiga taladda haya ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi, ayaa sheegay in wasiiradda is casilay haddii aanay ku gafin qodobada ciqaabta xisbiga ay ka sii mid ahaan doonaan.
“Wasiirradani waa qof aqoon-yahan ah oo Madaxweynuhu uu karti ku doortay, beri buu dooran karaa, maanta wuu eryi karaa. Waxay ku xidhan tahay siday isku casileen ayaa horta sharciga loo eegayaa. Xisbiguna xeer ayuu leeyahay qofkii ku gefa xeerkaas waa lagu ciqaab mariyaa,” ayuu yidhi guddoomiye Muuse Biixi oo VOA-da la hadlay.
Guddoomiyaha Kulmiye ayaa ku doodaya in haddii xubnaha iscasilay si abaabulan isu casileen talaabo laga qaadi doono “Waxa la is weydiin doonaa miyay ka hor yimaadeen (Wasiirradii Is casilay) barnaamijkii xisbiga iyo xukuumadda. Haddii ay noqoto HAA inay ka hor yimaadeen oo waliba si abaabulan uga hor yimaadeen. Xeerka xisbigu wuxuu tilmaamayaa in tallaabooyin laga qaado. Haddii ay arrin iska caadi ah noqotana qofku xisbigiisii wuu iman karaa. ”
Guddoomiyaha Kulmiye wuxuu ku dooday inaanay wasiirrada iscasilay saamayn ku yeelan doonin xukumadda “Waxay ila tahay saamayn ku yeelan maayo, marka hore Wasiirradu waa dhawr iyo konton sagaal ayaa is casilay. Waad arragtaan oo dawladii way dhisan tahay. Ta labaad dawladdu waa dawlad Madaxweynuhu maamulo oo Madaxweynuhu awooda leeyahay. Ma aha dawlad baarlamaan ku fadhida, ninka Wasiirka ah Madaxweynaha ayaa shaqadda qora. Wasiirraduna waxay Madaxweynaha ka kaaliyaan hawshiisa iyo siyaasad gaar ah iyo awood ay leeyihiin oo gooni ahi ma jirto, ” ayuu yidhi Mr Muuse.
Ugu dambeyn wuxuu guddoomiyaha Kulmiye ku dooday in Madaxweyne Siilaanyo xaq u leeyahay inuu taageero cid ka mid ah musharaxiinta Kulmiye, waxaanu yidhi “Madaxweynuhu waa Guddoomiyihii xisbigan aasaasay, Madaxweynuhu caalamka oo dhan haddii uu xilka ka degayo waa khasab inuu cid u soo dhiso oo u soo barbaariyo. Markaa ceeb ma aha haddii uu aniga ama qof kaleba uu soo jeediyo oo uu yidhaahdo qof kaas ayaa ku habboon. Waxay ila tahay Madaxweynuhu ma aha Komishaneer u dhex ah xisbiyadda. Maadaama oo uu odaygii xisbigan soo aasaasay yahay, waa ku waajib inuu cid taageero oo hawshaas ka bixi kara, mana ah wax laga cadhoodo. ”
Guddoomiyaha Xisbul-Xaakimka KULMIYE
Previous articleWasiirkii Ciyaaraha Oo Ku Biiray Liiska Masuuliyiinta Maalmahan Iska Casishay Xukuumadda
Next article“Ma Ihi Askari Looga Baqayo Dalka Ammaankiisa” Cabdicasiis Samaale